वामदेव गौतमपछि अर्का प्रभावशाली नेताले गरे एमाले बाट राजिनामा दिने घोषणा ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
वामदेव गौतमपछि अर्का प्रभावशाली नेताले गरे एमाले बाट राजिनामा दिने घोषणा ?
नेकपा एमालेमाथि अर्को बज्रपात भएको छ । माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपामा एमालेमा लागेपछि सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमाएका एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह अन्ततः एमालेमा पनि आफू रहन नसक्ने निचोडमा पुगेका छन्।
त्यसकै नाममा अहिले प्रदेशभर एमसीसीको विरोधदेखि किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सडक प्रदर्शन हुन थालेका छन्। ‘हामी एमाले होइनौं। नेकपा हौं। नेकपा भनेरै ओलीपक्षमा गएका हौं।
नेकपाको निरन्तरता नहुने भए नयाँ दल खोल्ने हुन सक्छ भनेरै आइटी आर्मीको अभ्यास गरिएको हो’, साहको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अब हामीले खोल्ने दल संविधान र अहिलेको व्यवस्थाविरोधी नीति लिएर अघि बढ्ने खालको हुनसक्छ, हामी त्यही तयारीमा छौं।’
यसका लागि संसदबाहिर रहेका कम्युनिस्टहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने साहको योजना छ। त्यसका लागि उनले छलफलसमेत अघि बढाइसकेका छन्। कम्तीमा तीन महिनाभित्र आफ्नो ने्तृत्वमा पार्टी गठन गर्नेगरी साह अघि बढेको उनीनिकट ती नेताले बताए।
तर, साहले आफूले नयाँ पार्टी गठन गर्नलागेको बारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। ‘अहिले सबै कुरा नभनौं, तपाईंसँग भेटेर सबै कुरा खोल्छु। फोनमा कुरा नगरौं’, काठमाडौंबाहिर रहेका साहले भने। साह अहिले प्रदेश २ का जिल्लामा केन्द्रित छन्। उनको प्रयासकै कारण अन्यत्र भन्दा प्रदेश २ मा माओवादीले अलि धेरै नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनी ओलीविरुद्ध उभिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको र जनताको प्रतिनिधि थलो विघटन गर्नु जनताको अपमान भएको उल्लेख गरेका थिए। विघटनलगत्तै नेकपामा ओली एकातिर र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर देखिए। एकले अर्को पक्षलाई निषेध र कारबाही गर्ने शृंखला चल्यो।
प्रचण्डले नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा अर्का अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गराए। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद यसरी उत्कर्षमा पुगेपछि, खासगरी नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएपछि साहको असन्तुष्टि सुरु भयो। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका साहले बैठक कक्षमा उठेरै नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन नहुने बताएका थिए।
तर, उनको विरोधको सुनुवाई भएन। त्यही आक्रोशमा उनी पुस ९ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुपस्थित भए। भोलिपल्टै ९पुस १० गते० उनी एकैपल्ट सहरी विकास मन्त्रीका रुपमा सपथ लिन शीतलनिवास पुगे र ओली क्याबिनेटमा सामेल भए।
उनी मन्त्री बन्दा नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपालपक्षमा विभाजित मात्र थियो। समानान्तर गतिविधि तीब्र बनेका थिए, तर पार्टी एउटै थियो। नेकपाको वैधानिकताको लडाइँ निर्वाचन आयोगमा थियो। साह ओलीपक्षका बैठकमा नियमित सहभागी भइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपाका दुई घटक एमाले र माओवादीलाई ब्यूँताइदिएपछि अवस्था साहले सोचेभन्दा भिन्नै हुनथाल्यो।
उनी त्यसपछि एमालेका जम्मा दुईटा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मात्र सहभागी भए। बैठकका निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। आफू नेकपाको निरन्तरता भनेर मात्र ओलीपक्षमा गएको, तर एमाले हुन नसक्ने बताउन थाले।
यसबीचमा उनले माओवादीमा फर्कने प्रयत्न पनि गरे, त्यसका लागि नेताहरुलाई भेटे। तर, प्रचण्डबाट सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ नपाएपछि उनी न एमालेमा रहन सक्ने न माओवादीमा फर्कने स्थितिमा पुगे। साहनिकट एक नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्शमा पुग्नुभो।